Inqubomgomo yobumfihlo | WikiWon
Ubumfihlo izivakashi WikiWon kubaluleke kakhulu kithi. Kumele ukwazi Inqubomgomo yethu yemfihlo mayelana ulwazi lomuntu eqoqwe noma wathola ekuvakasheni kwakho nendlela esetshenziswa. yobumfihlo yethu ingase ubukeza uma kudingeka. Ngakho une ukuvakashela leli khasi njalo. Asizange ukuqoqa ulwazi lomuntu siqu okuyinto kuhlobene yini olukhombekayo. Nansi eminye iminingwane mayelana Inqubomgomo yethu yemfihlo.
Sidinga lolu lwazi efana amawebhusayithi amaningi idinga for ngcono injongo. lwamakholi yethu ingase iqukathe okulandelayo;
i-ISP / Umhlinzeki Wesevisi Ye-inthanethi
Idethi nesikhathi Isitembu
Ama-cookie kanye Web Beacons:
Ngezinye izikhathi lapho kudingeka, sisebenzisa amakhukhi ukuze sigcine ulwazi mayelana izintandokazi isivakashi yethu nomlando yesivakashi ukuze sihlinzeke izinhlelo ezingcono kubo izivakashi zethu.
Mayelana Google Advertising:
Noma yimuphi izikhangiso sinikezwa yi-Google, Inc., futhi kungenzeka izinkampani abasemaqenjini elawulwa usebenzisa amakhukhi. Lawo makhukhi avumela i-Google ukubonisa izikhangiso ezisuselwe ekuvakasheni kwakho kule sayithi kanye nakwamanye amasayithi asebenzisa amasevisi wokukhangisa we-Google. Funda indlela ukuphuma ukusetshenziswa ikhukhi ye-Google. Njengoba kushiwo ngenhla, iyiphi kokulandela kwenziwe yi-Google amakhukhi nezinye izindlela sinezinqubomgomo ubumfihlo siqu ye-Google.
Kuyini ikhukhi le-DoubleClick DART? Ikhukhi le-DoubleClick DART isetshenziswa yi-Google ku served ummemezeli amawebhusayithi ukubonisa AdSense wezikhangiso okuqukethwe. Lapho abasebenzisi vakashela ummemezeli AdSense sika iwebhusayithi futhi noma umbono noma uchofoze isikhangiso, ikhukhi ingase kwehla phezu isiphequluli ukuphela yomsebenzisi. Idatha kusula kulawo makhukhi izosetshenziselwa ukusiza abashicileli AdSense kangcono ukukhonza kanye ukuphatha izikhangiso kusayithi yabo(s) nakuyo yonke iwebhu. Abasebenzisi ukuphuma ukusetshenziswa ikhukhi DART ngokuvakashela inqubomgomo yobumfihlo ye-Google isikhangiso kanye inethiwekhi okuqukethwe.
Izivakashi ingase icelwe ukuba bavumelana newsletter yethu ngokunikeza igama imeyili ikheli ukuthola izibuyekezo noma ukuxhumana nathi at. Sisebenzisa evikelekile opt-in ukuthenga uhlelo futhi sinelungelo ukuxhumana ababhalisile ngolwazi ezihlobene kule webhusayithi kanye ibhulogi. Subscribers bangase bayeke ukubhalisa noma nini futhi zonke imeyili zilethwe sizoqukatha isixhumanisi i "Zikhiphe ohlwini". Uma udinga olunye ulwazi oluthe xaxa noma unemibuzo mayelana nobumfihlo inqubomgomo yethu sicela ukhululeke ukuxhumana nathi nge-imeyili ngesikhathi moborate@gmail.com
Uyakudinga ukulandela izinqubomgomo zethu zobumfihlo:
Uma kukhona ithuluzi ayisebenzi sicela uxhumane ungitshele ngoba inkinga yakho iziphi i ukusiza.
Uma sinqamukile nganoma yisiphi isixhumanisi,akusebenzi uxhumane nami futhi i uzokwenza ukuthi elungile 24 amahora
Uma nganoma yisiphi isixhumanisi kulanda akakwenzi ayisebenzi sicela uma ikhona inkinga show ku website yami ningithinte ngizokwenza
Uma udinga noma yikuphi elinye ithuluzi,plugins,themes,izihloko ezingaphezu ningithinte i izokwengeza ithuluzi, zonke izidingo e 24 amahora uma sizokwazi nje umlayezo kimi wena.
Ungaxhumana nami nge ikhasi lami. Ngithinte